Dzinza raJesu | Kugadzirwa Kwaiitwa Machira Kare
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kazakh Kikamba Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mongolian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Norwegian Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Ndiani aiva baba vaJosefa?
Josefa, muvezi wekuNazareta ndiye aiva baba vaJesu vekurera. Asi ndiani aiva baba vaJosefa? Evhangeri yaMateu inoti Jesu akabva nekudzinza raJakobho, asi yaRuka inoti Josefa aiva “mwanakomana waHirai.” Nei zvichiita sokuti pane musiyano?—Ruka 3:23; Mateu 1:16.
Nhoroondo yaMateu inoti: “Jakobho akabereka Josefa.” MuchiGiriki shoko rakashandiswa apa rinonyatsoratidza kuti Jakobho ndiye aiva baba vaJosefa chaivo. Saka Mateu akanga achitsanangura dzinza raJosefa, kureva madzimambo aigara pachigaro chaDhavhidhi. Kuberekerwa mudzinza iroro ndiko kwakaita kuti Jesu, mwanakomana waJosefa wekurera, ave nekodzero yepamutemo yekugara pachigaro cheumambo.
Asi nhoroondo yaRuka inoti: “Josefa,” aiva “mwanakomana waHirai.” Mashoko iwayo ekuti “mwanakomana wa-” anogona kureva kuti “mukuwasha wa-.” Mashoko akafanana neaya anowanika pana Ruka 3:27 panotaurwa nezvaSheatiyeri. Baba vake chaivo vainzi Jekoniya. Asi rugwaro urwu rwunoti aiva “mwanakomana waNerai.” (1 Makoronike 3:17; Mateu 1:12) Zvinoita sokuti Sheatiyeri akanga akaroora mwanasikana waNerai asina kutaurwa nezita, akabva ava mukuwasha wake. Saizvozvowo, Josefa ainzi “mwanakomana” waHirai pakuti akanga akaroora Mariya, mwanasikana waHirai. Saka Ruka anotsanangura dzinza raJesu “panyama,” achitaura achibva nekuna Mariya, amai vaJesu vekubereka. (VaRoma 1:3) Saka Bhaibheri rinotipa nhoroondo mbiri dzakasiyana dzinotibatsira kunzwisisa dzinza raJesu.
Panguva yaiitika zvinhu zvinotaurwa muBhaibheri paiwanika machira nemadhayi akaita sei?
Shinda yakadhayiwa yakawanikwa mune rimwe bako riri pedyo neDead Sea yakagadzirwa gore ra135 C.E. risati rasvika
Mvere dzemakwai, dzembudzi, uye dzengamera dzaishandiswa zvikuru pakugadzira machira kuMiddle East. Machira akawanda aishandiswa kare ainge akagadzirwa nemvere dzemhuka, uye Bhaibheri rinotaura kakawanda nezvemakwai, kuveura, uye hembe dzaigadzirwa nemvere dzemhuka. (1 Samueri 25:2; 2 Madzimambo 3:4; Jobho 31:20) Mufurakisi uyo waishandiswa pakugadzira rineni, wairimwa kuIjipiti uye kuIsraeri. (Genesisi 41:42; Joshua 2:6) VaIsraeri vanogona kunge vaisarima donje, asi Magwaro anoratidza kuti vanhu vekuPezhiya vaishandisa shinda yaigadzirwa nedonje. (Esteri 1:6) Siriki (silk) yaidhura uye inofanira kunge yaiuya nevanhu vaifamba vachitengesa vaibva kuMabvazuva.—Zvakazarurwa 18:11, 12.
“Mvere dzemakwai dzaiva nemavara akasiyana-siyana dzisati dzaiswa dhayi, kubva paruvara rwakati ngwee kuchena kusvika kuruvara rwakasvibira,” rinodaro bhuku rinonzi Jesus and His World. Uye kazhinji kacho, mvere dzaiwanzodhayiwa. Dhayi yepepuru iyo yaidhura chaizvo yaibva muzvipuka zvemugungwa zvakaita sehozhwa uye mumiti yakasiyana-siyana, midzi, nemashizha. Uyewo zvipukanana ndizvo zvaishandiswa pakugadzira madhayi matsvuku, eyero, ebhuruu, uye matema.